People of Color Archives | Utah Pride Center
musha » Vanhu Vevara
Directory Category: Vanhu Vevara
10 yegumi: Zviwanikwa zveYedu Queer uye Latinx Nharaunda
Latinx - Latina - Latino, Zita & Gender Shanduko Rubatsiro
Iyi vhidhiyo yakateedzana kubatana pakati paNick Arteaga, iye / iye, ivo / ivo Nharaunda Zvirongwa Zvirongwa kuUtah Pride Center naNata Choi, He / him Vechidiki neMhuri Zvirongwa Director kuLatino Behavioral Health Services.
Isu tiri kugadzira vhidhiyo zvemukati kuratidza vanhu, masangano uye zviwanikwa zveiyo Queer neLatinx huwandu hwevanhu.
801-821-5231 ext 1016
Kuongorora kweKupindirana kweKuderera Kushushikana uye Kusakanganiswa Kudya uye Kuekisesaiza Maitiro Ekuita Zvepabonde Vashoma Varume veRudzi.
Bisexual, Pansexual, uye zvimwe Zvepabonde Fluid Chitupa, Latinx - Latina - Latino, Vanhu Vevara, Mikana yekutsvagisa
Zita rangu ndinonzi Andrew Pereira, uye ndiri mudzidzi wechiremba paUniversity yeNorth Texas ari kupedzisa ongororo achiongorora chimiro chemuviri, kudya, rusaruraganda, nenyaya dzakabatana muvashoma pabonde varume vane ruvara. Ichi chidzidzo chakanangana nekugadzirisa chinodiwa chesainzi chekutarisa kune vanhu vane huwandu hushoma hunowanda, avo vanowanzo kufuratirwa nevanoongorora. Zvinowanikwa munharaunda mako rubatsiro rwakakosha kugadzirisa izvozvi.
Kuti vakwanise, vatori vechikamu vanofanirwa kuve:
pamusoro pemakore makumi maviri nerimwe
vane munguva yakapfuura kana izvozvi vari kugara muUS
kuratidza semunhu weruvara
Ziva seasina kunyatsoita zvepabonde (semuenzaniso, ngochani, bi, kubvunza, pansexual, kana asexual).
Vatori vechikamu vanopedzisa pfupi 15-20 mineti ongororo vanogona kupinda mufanidzo kuti vakunde imwe yematatu emadhora zana emakadhi echipo. Vatori vechikamu vanogona zvakare kusarudza kupinda yerudo yesarudzo yavo pachinzvimbo.
Mushure mekupedza ongororo, vatori vechikamu vanozobvunzwa kuti vatarise shamwari, vavanoshanda navo, kana vavanozivana navo vanogona kuve vanokodzera kutora chikamu. Ndokumbirawo mufunge kuendesa iyi email kunhengo dzenyu, kunyangwe kana vamwe vacho vasingakwanise, sezvo wese anotora chikamu vangatumira iyo email kune yakakosha pakuonekwa uye nekubatanidzwa kwatiri kutarisira kuwana.
Ndatenda nenguva yenyu!
Nzvimbo yeongororo: Pamhepo kuburikidza neQualtrics
Mukuru Wekuferefeta: Patricia Kaminski, PhD., Dhipatimendi rePsychology, (940) 565-2671, patricia.kaminski@unt.edu.
Nhema Trans Varume
Vanhu Vevara, Trans - Agender - Asiri-Bhinari Zviwanikwa
NDINI NEKUTI TIRI
Pamwechete Tichawana Kuenzana Kune Vese Vatema Transmen
Nyika Yevatema Mutongo Mubatanidzwa
Masangano Emunyika, Vanhu Vevara
Sangano reNational Black Justice Coalition (NBJC) isangano rekodzero dzevanhu rakazvipira mukupa masimba kune vanhu vatema, ngochani, bisexual, transgender, queer uye vanhukadzi vanodanana (LGBTQ / SGL) vanhu, kusanganisira vanhu vanorarama neHIV / AIDS. Basa reNBJC kupedza rusaruraganda, kuvengwa kwevanhukadzi, uye LGBTQ / SGL kusarura uye kushorwa. Sangano rinotungamira kodzero dzeveruzhinji reAmerican LGBTQ / SGL seAmerica rakanangana nehurongwa hwehurumende, NBJC yakagamuchira mutero wekutungamira mhuri dzeVatema mukusimbisa zvisungo nekuvhara mipata pakati pemafambiro erunyararo uye kuenzana kweLGBTQ / SGL.
QTBIPoC Mental Hutano Fund
Utano uye Utano, Latinx - Latina - Latino, Vanhu Vevara
National Queer uye Trans Therapists yeColor Network - Mental Health Fund (MHF).
Iye zvino kubvuma kunyorera! Mugumo waKurume 31, 2021.
Iyo MHF inopa rubatsiro rwemari kune vanozeza uye vanoendesa vanhu vane ruvara kuwedzera mukana wekusimbiswa kwehutano hwepfungwa hweQTBIPoC neQTBIPoC. Chirongwa ichi chakagadzirirwa kupa rutsigiro rwemari kuQTBIPoC kushanda pamwe nevarapi mukuyedza kugadzirisa zvipingamupinyi zvehupfumi zviripo mukuchengetedza hutano uye hutano hwepfungwa. Iyo MHF inopa rutsigiro rwemari kusvika kumisangano mitanhatu nachiremba ane rezinesi. Vanyoreri vanogona kukumbira kusvika kumadhora zana pachikamu.
Batanidza kune rumwe ruzivo, maFAQ, kana kushandisa
Sacred Circle Healthcare (SCHC)
Utano uye Utano, Vanhu Vevara, Vanhu Vemagariro Evanhu
Yakatanga mu2012 sesangano reConfedededed Tribes yeGoshute Reservation (CTGR), Sacred Circle Healthcare (SCHC) inodada uye inoshandirwa neGoshutes. Kuchengetedza nhaka yeGoshute yekudzivirira nekutarisira mhuri, tinowedzera tsika iyi kuvanhu vese vasina kuchengetedzwa munharaunda medu.
Isu tinoramba kurega kuwana, dzinza, kana mamiriro ehupfumi pamwe nekutadzisa mumwe munhu kubva mukuwana hutano hwakakwana. Mubhadharo wekutanga weSCHC ndeyeMedicaid nezvimwe zvibvumirano zvakaita seMedicare, Blue Cross Blue Shield, naMolina. Pamusoro pezvo, isu tinoshanda sechibvumirano che638 nemitengo ye340b yemasevhisi emishonga.
Dzidza Zvimwe: https://sacredcirclehealth.com/location/ibapah-clinic/
Salt Lake Guta, Utah 84111
Dzidza Zvimwe: https://sacredcirclehealth.com/location/pamelas-place/
660 Maodzanyemba 200 East Suite 250
Dzidza Zvimwe: https://sacredcirclehealth.com/location/salt-lake-city/
West mupata guta
West Valley Guta, Utah 84119
Dzidza Zvimwe: https://sacredcirclehealth.com/location/west-valley-city/